यौन उत्तेजना बढाउने औषधि के–के हुन् : यसले कसरी काम गर्छ ? – Sanjal Nepal
Homeसमाचारयौन उत्तेजना बढाउने औषधि के–के हुन् : यसले कसरी काम गर्छ ?
November 3, 2020 admin समाचार 5809
सिनामंगल स्थित सडकमा कम चहलपहल थियो । मध्यान्हको घामका कारण मानिसहरु उतिसारो सडकमा थिएनन् । त्यही नजिकै रहेको एउटा औषधि पसलमा एक युवक पसलेसँग जोडतोडले कुरा गरिरहेका थिए । ‘जे पायो त्यहीं गफ दिने, ८ हजार तिरेको के काम’ उनी जङ्गिए । पसलले आफ्नो कुराम मनाउने प्रयास गरिरहेको थिए । ध्यान त्यतै केन्द्रीत हुन्छ । ति युवकले ८ हजार तिरेर यौन शक्ति बढाउने कफी किनेका रहेछन् । त्यसले काम नगरेपछि पैसा फिर्ता दिन पसलेसँग जोड गर्दै थिए । उक्त कफी पिएमा यौन क्षमता र चाहना दुबै बढ्ने र सोको प्रभाव १५ मिनेटमै देखिने भएपछि कफी खरिद गरेका थिए । कफीको प्रभावको परीक्षण आफ्नै प्रेमिकालाई गरे तर कुनै असर देखिएन । उनको बुझाइमा प्रेमिका शारीरिक सम्बन्धका लागि तयार भइनन् । योजना सफल नभएपछि उनी पैसा फिर्ता माग्न आएका थिए । पसलेले बढी कुरा गर्ने भन्दै प्रतिवाद गरिरहेका थिए ।
भारतमा ४ लाख भिखारी, नेपालसम्म आइपुग्ने भिखारीको सम्पत्ति थाहा पाउँदा दुनियाँ चकित !
रुपा र कृष्णको जस्तै अर्को उदाहरणीय जोडी, परिवार छोडेर सुजललाई साथ दिन आइन् सितल (भिडियो हेर्नुस्)
December 6, 2020 admin समाचार 6325
काठमाडौ । फेसवुकमा चिनजान भएका एक युवकसंग खोटागंकी युवतीको प्रेम बस्यो । उनीहरु लामो समय सामाजिक सञ्जालमा कुराकानी गरे । एक दिन युवतीले युवकलाई आफ्नो तस्बिर पठाउन भनिन् । उनले तस्बिर पठाए । त्यसमा एउटा
भाइरल बाल गायक सचिन र रबिना बसेलको पहिलो गीत ´ओठ खोलेर´ सार्वजनिक (भिडियाे सहित)
January 3, 2021 admin समाचार 1130
अहलिे केही समयदेखनिै मडियिा, सामाजकि सन्जाल लगायत जुनसुकै प्लाटफार्ममा पन िएउटा ९ बर्षयि बालक सचनि परयिारको भडियिो यत्रतत्र सर्बत्र भाईरल भईरहेको छ । नपत्याउदो तरकिाले भाईरल भईरहेका य िबाबु गुल्मी मुसकिोट थाई घर भएर अहलिे
January 3, 2021 admin समाचार 1164